Maxay tahay sababta keentay baaqashada shirkii Madaxweyne Farmaajo, Deni iyo A/Madoobe? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxay tahay sababta keentay baaqashada shirkii Madaxweyne Farmaajo, Deni iyo A/Madoobe?
Maxay tahay sababta keentay baaqashada shirkii Madaxweyne Farmaajo, Deni iyo A/Madoobe?
Waxaa baaqaday furitaanka shir magaaladda Muqdisho uga furmi lahaa Madaxweynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Madaxweyne-yaasha Dowlad-goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ka dib markii Axmed Madoobe keenay shuruud ah in Dowladda Soomaaliya marka hore ciidankeeda laka soo baxdo gobolka Gedo ee koofurta Soomaaliya.
Ilo- xog kas ah ayaa sheegay in Sababaha shirka u baaqday ay tahay Shuruud ka timid Jubbaland oo ku saabsan arrinta Gobolka Gedo oo ah in Dowladda Federaalka ka soo saarto Ciidamada ay geysay dabayaaqadii 2019 ilaa horaantii 2020.
Waxaa xalay kulan saqdii dhexe gaaray yeeshay Madaxwey-yaasha Jubbaland iyo Puntland oo ay ka wada hadlayaan arrimaha taagan iyo shuruuda Jubbaland ku xirtay kulankaas iyada oo Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu ku raacay dalabka Jubbaland.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku shaaciyay kulanka caawa ay yeelanayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, iyadoo qoraalkaas loo arkayay mid Madaxtooyada ku iclaamineysay kulanka, laguna qarinayay shuruuda Jubbaland saacadihii hore ee maanta ka timid oo ka mid ahaa waxyaabihii uu la wadaagay Madaxweyne Axmed Madoobe Safiirka Mareykanka.
Waxaa jiray kulan guul daraysatay oo shalay dhexmaray Madaxweynaha Jubbaland iyo Taliyaha NISA kaas oo saacado badan qaatay waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid tahay arrinta Gobolka Gedo iyo ciidanka Dowladda Soomaaliya gaysay gobolkaasi.
“Soomaaliya waxa ay u baahan tahay wada ogol iyo tanaasul – haatan waa waqtigii hogaamiyeyaasha muujin lahaayeen xigmad,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaarada Maraykanka ee Muqdisho taas oo quus badan ka muuqatay.
Wadaxaajoodyadii uu diblumaasiga la qaatay hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Midowga Nabada iyo Horumarka ayay tibaaxdey in ay khuseeyeen arrimaha doorashooyinka 2020-21 iyo siyaasad loo dhan yahay.
“Waxaan dhiiragelineynaa astaamaha ay muujiyeen saamileyda siyaasada Soomaaliya ee baadigoobeysa tanaasulka si shaqo howleedka Dhuusamareeb3 loogu fuliyo waqtigeeda iyo qaab loo dhanyahay,” ayay lagu yiri bayaanka Maraykanka.
Magaaladda Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay marti galisay kulamo aan kala joogsi lahayn kuwaas oo looga hadlay arimaha doorashooyinka iyo khilaafka ka dhexeeya madaxda Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland.
Maqaal horeWsiirka shaqada XFS Oo shir muhiim ah uga qeyb galay Fogaan Aragga
Maqaal XigaFaah faahino ka soo baxaya weerar ka dhacay magaalada Boorama